White Sand Beach, na Virgin Beach " Journey-Assist - Tsara indrindra
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Morontsiraka fasika fotsy, na tora-pasika virjiny (tora-pasika virjiny)
Tora-pasika fasika fotsy (tora-pasika fasika fotsy), na tora-pasika virjina (tora-pasika virjiny)
Tora-pasika tsara indrindra any East East Bali
White Sand Beach, na Virgin Beach na Jasri Beach no morontsiraka tsara indrindra amin'ny morontsiraka atsinanan'i Bali.
Fotsy fotsy tanteraka izy io taloha, fa ankehitriny, ny tampon-volkano dia matetika no hita. Na izany aza, ny White Sand Beach dia tsy nisy fiatraikany loatra tamin'izy ireo, rakotra fasika tsara sy malefaka ary mahafinaritra ihany izy io.
Fifangaroana fasika fotsy sy mainty tsy mampino ao amin'ny Virgin Beach
Ity morontsiraka Bali ity dia miorina akaikin'ny Chandidasa, eo anelanelan'ny vohitra Perasi sy Bugbug. Iray amin'ireo toerana vitsivitsy any atsinanan'ny Bali izay misy fasika fotsy. Noho ny onjan-drano ambany dia mety ny milomano eto ary mora ny snorkel. Na izany aza, tsy dia betsaka ny olona eto noho ny halaviran'ny morontsiraka amin'ireo zotram-pizahan-tany.
Ity no saika ny morontsiraka atsinanan'ny nosy, izay mety amin'ny filomanosana sy filentehan'ny masoandro feno. Ny morontsiraka iray hafa toa an'io any amin'ny nosy io dia azo heverina ho Bias Tugel ihany, saingy tsy dia be mpitia sy tsy dia manintona loatra izy io.
Ny morontsiraka dia manana fomba fijery tsara tarehy. Any amin'ny helodrano kely no misy azy. Ny morontsiraka dia tokony ho 700 m ny halavany ary miolakolaka amin'ny endrika volombava. I Jasri dia voahodidin'ny havoana ambany tototry ny kirihitra sy hazo. Amin'ny toerana sasany dia miakatra eo akaikin'ny rano ny vatolampy ambany. Ny fasika dia tsy fotsy fotsy, fa misy loko mavo. Rehefa miditra lavitra any amin'ny ranomasina ianao dia hitanao fa mainty ny ambany eto, mitovy amin'ny morontsiraka atsinanana Bali manontolo.
White Sand dia morontsiraka somary malalaka, ary ankoatr'izay, tsy dia be olona loatra noho ny halaviran'ny toerana fizahan-tany sy ny seranam-piaramanidina. Betsaka ny fatana masoandro eto. Madio sy milamina matetika ny ranomasina eto, tsy misy onja. Noho izany, ny White Sand dia mety amin'ny fianakaviana manan-janaka. Manakaiky ny sisiny, misy vatolampy tsara tarehy izay afaka miasa ho toerana voajanahary ho an'ny fakana sary eny amoron-dranomasina.
Koa satria tsy feno olona ity morontsiraka ity, foana ny ankamaroan'ny sun lounger. Indraindray ireo vondrona fizahan-tany dia tonga any Jasri mandritra ny fitsangatsanganana any atsinanan'i Bali. Amin'ny faran'ny herinandro, afaka mahita Bali maro be ianao eny amoron-dranomasina ary miaina kely ny fiainana. Madio sy voadio tsara foana anefa ny faritany, satria diovina ara-potoana sy tsara.
Misy kafe 10 eo ihany koa izay ahafahanao mihinana tsakitsaky sy misotro ranom-boankazo matsiro. Ireto orinasa ireto dia manolotra ny mpanjifa lounger sun, lamba famaohana ary elo maimaimpoana ho an'ny mpanjifany.
Fotodrafitrasa amoron-dranomasina fotsy
Manakaiky ny karazana trondro tropikaly sy haran-dranomasina tsy fahita firy any amoron-dranomasina ity. Matetika ao amin'ny trano fisotroana izay alàlan'ny seza anaovana azy, dia atolotra fantsona sy saron-doha filomanosana rano ao anaty rano ianao. Azonao atao koa ny manakarama sambo miaraka amin'ireo mpitarika izay afaka mitondra eny amin'ny ranomasina misokatra, mba hahafahanao mankasitraka ny hatsaran'ny rano anaty rano. Afaka milatsaka eto ianao mankany Padang Bay na any Blue Lagoon.
Ny fatiantoka ny morontsiraka (aka plus) ny fasika fotsy dia ny tsy fisian'ny trano eo akaiky eo, fa vokatr'izany dia tsy misy be loatra koa ny mpandeha vakansy sy ny mpivarotra manelingelina. Matetika izy ireo dia tonga eto mandritra ny 1 andro avy any amin'ny faritra hafa amin'ny nosy, na ireo izay nanorim-ponenana tao Candidasa dia tonga eto.
Zavatra tokony hatao eny amoron-dranomasina:
Milomano ao anaty ranomasina, snorkeling.
Yachts sambo sy sambo.
Fitsidihana ny kafe.
adiresy: Jalan Pantai Perasi, Sengkidu, Manggis, Sengkidu, Kec. Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali 80813, Indonezia
Tapakila fidirana - 10 000 ropia
Masoandro mipetaka amin'ny masoandro rehefa manafatra zavatra ao amin'ny cafe
Fasika amin'ny tora-pasika Virjiny
Virgin Beach eo amin'ny sari-tany
Tora-pasika virjina amin'ny sari-tany zanabolana Bali
Raha ny hevitry ny mpanoratra manetriketrika dia ity no morontsiraka filomanosana tsara indrindra any Bali! :). Rano mafana manana loko turquoise tsy mampino! Ny onja amin'ny fotoana iray ihany amin'ny morontsiraka iray dia malemy paika, ary iray hafa matanjaka sy manome hery! Ny natiora tsara tarehy dia mandahatra ny morontsiraka. Ny fasika fotsy ampiarahina amin'ny mainty dia toa mahafinaritra fotsiny.
Eo amin'ny ilany havia amin'ny morontsiraka, eo amoron'ny hantsam-bato, ny ankizy eo an-toerana (ary tsy izany ihany) dia manjono hazandrano (hetsika mitaky fahaiza-manao, tongotra haingana ary maso tsara).
Ny atmosfera eny amoron-dranomasina dia mafana sy milamina. Mahatalanjona ireo panorama ...
Noho ny halaviran'ny morontsiraka amin'ireo lalan'ny fizahan-tany sy trano fandraisam-bahiny avo lenta, dia tsy feno olona eto foana izy ary mahalana ianao no maheno kabary Rosiana.
Tsy mamporisika ny hitsidika an'ity torapasika ity aho!, Araka ny tiako .. mba tsy hipoka ny toerana misy azy ankehitriny.
Ao anatin'ny halavirana an-tongotra lavitra ny moron-dranomasina dia misy kapaoty faran'izay midadasika miaraka amin'ny fomba fijery kanton'ny ranomasina. Tian'ireo tanora ao an-toerana ny miara-milalao amin'ny lay amin'ity kapa ity.
Nipetraka tamin'ny adiny iray sy sasany tamin'ny bisikileta avy teo amoron-dranomasina (any Ubud) izahay, dia tsy kamo nankanesana tany aminy indraindray ary tsy te handao an'ity morontsiraka mandray vahiny ity amin'ny hariva ...
Fanovana farany 5 volana lasa izay nataon'i Ghost
Reply to Masina
Seashells dia misy hisambotra zavatra hafa. Mazava ho azy fa tsy mankaleo! Ny vodin-dranomasina dia mitondra onja mankany amoron-dranomasina, izay avy ao am-pony dia mikapoka ny tongotr'ireto akorabato sy vatokely ireto.
Noho izany, ilaina ny fahaiza-manao mba hanananao fotoana hahitana sy hisamborana ilay akorandriaka alohan'ny hanarohan'ny onja manaraka ny ranonao miaraka amin'ny orana "meteorika", ary miaraka amin'izay dia mitondra ireo akorandriaka rehetra avy amin'ilay onja teo aloha ho any anaty ranomasina.
Dernière modification il ya 5 ans par Hydriz
Fijery amoron-dranomasina avy amin'ny cape akaiky indrindra
Ny zava-misy ankehitriny miaraka amin'ny coronavirus sy ny sisintany mihidy ... dia handray soa amin'izany rehetra izany. Fanadiovan-tontolo iainana toy izany.
Miaina miaina malalaka ny natiora.
Nosy mahafinaritra i Bali. Ho an'ireo izay mitady toerana voalanjalanja ahafahanao miaina mifanaraka amin'ny vatanao sy ny fanahinao ary amin'ny natiora manodidina .. mety izany.
Ho an'ireo mpankafy fitsaharana Eoropeana olincclusive na artifisialy mitovy, tsy misy toerana eto, afa-tsy i Bukit.
Namaky tsy fahafaham-po be dia be tamin'ny forum aho momba ireo firenena ao Azia atsimo atsinanana sy Bali, indrindra .. avy amin'ireo mpangataka fialan-tsasatra toy izany ihany. Izay, raha tsy misy fahitalavitra misy fantsona teratany ao amin'ny hotely, na ao
ny trano fisakafoanana dia tsy manana nahandro nahaterahana, na ny fahasarotana hahazoana alikaola, toy ny any Sri Lanka .., avy eo ambanin'ny fahamendrehany ary izany rehetra izany dia tsy mamy ho azy ireo amin'ny toe-javatra toy izany.
Tsara amoron-dranomasina ity. Eo amboniny ianao dia tsy mieritreritra ny fijerinao, fa ny fahatsapanao.
Miombon-kevitra amin'ny mpanoratra aho. Ity morontsiraka ity dia tena iray amin'ireo tsara indrindra any Bali. Ary, azo antoka, mendrika ny fiheverana ireo mpangataka.
Angamba amin'ireo morontsiraka rehetra any Bali. ity no tsy tadidiko mihoatra ny ambiny. Marina, misy ihany koa ny morontsiraka Keramas misy fasika mainty, saingy azo antoka fa tsy natao ho an'ny fialantsasatra amoron-dranomasina io, fa ho an'ny fanahy sy fisaintsainana.